Mgbe Ị Ga-eme Nchọnchọ, Nyochaa, ma Kwụsị Backlinks Iji melite ọkwa ọchụchọ | Martech Zone
Mgbe Ị Ga-eme Nchọnchọ, Nyochaa, ma Kwụsị Backlinks Iji melite ọkwa ọchụchọ
Na Mọnde, Nọmba 2, 2021 Na Mọnde, Nọmba 2, 2021 Douglas Karr
Anọ m na-arụ ọrụ maka ndị ahịa abụọ na mpaghara abụọ na-arụ ọrụ ụlọ ahụ. Client A bụ azụmaahịa guzosiri ike nke nwere ahụmịhe afọ 40 na mpaghara ha. Onye ahịa B dị ọhụrụ nwere ahụmịhe ihe dị ka afọ 20. Anyị mechachara mejuputa saịtị ọhụrụ zuru oke mgbe anyị mechara nchọpụta maka ndị ahịa ọ bụla chọtara ụfọdụ atụmatụ ịchọ organic na-enye nsogbu sitere na ụlọ ọrụ ha dị iche iche:
Nyocha - Ụlọ ọrụ ahụ bipụtara ọtụtụ narị ibe ndị mmadụ n'otu n'otu na otu nyocha na nke ọ bụla nwere obere ọdịnaya na-abụghị ọrụ na ahịrịokwu ole na ole na nyocha. O doro anya na ebumnobi ha ebe a bụ ịgbalị itinye isi okwu maka ọdịdị ala na ọrụ enyere.
Ibe mpaghara - Ụlọ ọrụ ahụ bipụtara ọtụtụ ibe dị n'ime nke na-emegharị ọdịnaya nke ọrụ ụlọ a na-enye mana akọwapụtara obodo ma ọ bụ mpaghara dị iche na aha na ahụ. Ebumnobi ebe a bụ otu ihe… iji nwaa iji isi okwu mee ihe maka ọdịdị ala yana ọrụ enyere.
Anaghị m ekwu na nke a bụ atụmatụ nke ahụ enweghị ike ewere ya, ọ bụ naanị mmejuputa atumatu doro anya na nke na-adịghị mma nke ọdịnaya nke ezubere iche maka mpaghara na ọrụ. Abụghị m onye na-akwado atụmatụ a ma ọlị, anyị ahụla ihe ịga nke ọma dị egwu na ịkọwapụta mpaghara ọrụ dị n'okpuru ala, gụnyere adreesị nke ebe azụmahịa dị n'okpuru ala, gụnyere nọmba ekwentị (ya na mpaghara mpaghara. koodu), wee bipụta ozi siri ike na ahụ nke ibe gbasara ọrụ ahụ.
Enweghị ezigbo ihe kpatara na ibe mkpuchi ụlọ, dịka ọmụmaatụ, enweghị ike ịhọpụta nke ọma maka "Onye na-arụ ọrụ n'elu ụlọ" na mpaghara niile nke onye ọrụ ahụ na-arụ ọrụ. Ọ ga-akara m mma ịrụ ọrụ na ịkwalite na ịkwalite otu ibe ụlọ karịa inwe. mepụta ma soro ọtụtụ ibe maka onye ahịa.
Nke kachasị njọ, ndị ahịa abụọ a anaghị enweta ụzọ ọ bụla site na saịtị ha yana ọkwa ha etolitebeghị n'ime ihe karịrị otu afọ. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ha dị iche iche nwere saịtị (s) na otu ụlọ ọrụ ọbụna nwe ngalaba reikwu okwu. Ya mere… ego niile ha na-etinye anaghị eme ka ha bịaruo nso na-eto eto azụmahịa ha. Ha kpebiri inye ụlọ ọrụ m ohere iji wepụta atụmatụ ọhụrụ.
Maka ndị ahịa abụọ ahụ, anyị na-arụ ọrụ na-ebuli ọchụchọ mpaghara ha visibiliti site n'ịwupụta saịtị kachasị ọhụrụ, na-ewere drone na tupu / mgbe foto nke ọrụ ha n'ezie kama ịse foto ngwaahịa, nyocha nke ewepụtara mkpọsa, kewapụrụ ha na ndị asọmpi ha, duzie ọtụtụ puku njikọ dị n'ime na ibe ndị kwesịrị ekwesị, ma bụrụ ndị a. na-arụ ọrụ na ịgbasa iru ha na YouTube, mmekọrịta ọha na eze, akwụkwọ ndekọ aha, na akwụkwọ ndekọ aha ndị nrụpụta.
Mgbe Ime A Backlink Audit
Ihe ọzọ mere na-ekwu:
Onye ahịa A – onye anyị na-arụ ọrụ na ndị kasị ogologo, na-adịghị emeziwanye ha search engine visibiliti na-abụghị nke ika Keywords. Anyị gara n'ihu na-ebuli ibe ndị ahụ, jikọtara ya na YouTube, emelitere ihe karịrị akwụkwọ ndekọ aha 70… ma ka na-enwe obere mmegharị ọ bụla. Igodo nọ na-ahụ Keywords na-enweghị akara agakwaghị elu… ha niile liri na ibe 5 ma ọ bụ karịa.
Onye ahịa B - N'ime otu izu nke ibipụta saịtị ha, ha kọrọ na ha na-enweta ezigbo ndu, na ọkwa ha rịgoro enweghị akara isi okwu.
Mgbe anyị nyochachara asọmpi ha na ịkwalite ibe ha ruo izu, anyị ga-enyochakwu ihe kpatara ya Onye ahịa A adịghị emegharị ahụ. N'ihi atụmatụ ndị a na-enyo enyo ebutelarị, anyị chọrọ ileba anya na àgwà backlinks na saịtị ha. Ọ bụ oge ime a nyochaa backlink!
Nyochaa backlink na-achọpụta njikọ niile na saịtị ha ma ọ bụ ibe dị n'ime ha na nyochaa ogo saịtị ebe backlink dị. Nyochaa backlink chọrọ onye nke atọ SEO ngwá ọrụ… na m na-eji Semrush. Site na nyocha ndị a, ị nwere ike ịchọpụta njikọ sitere na saịtị dị elu yana backlinks ọjọọ (nke a makwaara dị ka nsị) nke ị kwesịrị iwepụ ma ọ bụ gwa Google ọkwa.
Kedu ihe bụ Backlinks ọjọọ?
Nke a bụ nnukwu nchịkọta vidiyo nke backlinks na ihe njikọ ọjọọ bụ, otú ha si eji blackhat SEO ọrụ, yana ihe mere ha ji mebie okwu Google na ekwesịrị izere ya n'efu.
Audits Backlink na Akwụsịghị azụlinks
iji Semrush's backlink audit, anyị nwere ike ịhụ nke ọma na ngalaba na ibe ndị zoro aka na saịtị ha:
Biko buru n'uche na ngwaọrụ ndị dị ka Semrush dị ịtụnanya mana enweghị ike nyochaa ọnọdụ ọ bụla maka onye ahịa ọ bụla. Enwere nnukwu ọdịiche, n'ọnụ ọgụgụ, n'etiti obere azụmahịa mpaghara yana ọrụ mba ụwa ma ọ bụ ọtụtụ asụsụ n'ịntanetị. Ngwa ndị a na-ejikarị emeso ha abụọ nke m kwenyere na ọ bụ oke oke. N'okwu a nke onye ahịa a:
Mgbakọta dị ala - Ọ bụ ezie na akụkọ a na-ekwu, zuru okè, Ekwetaghị m. Ngalaba a nwere ọnụ ọgụgụ dị ala nke ngụkọta backlinks ya mere inwe otu backlink na-egbu egbu n'ezie - n'echiche m - bụ nsogbu.
Quality - Ebe ọ bụ naanị otu njikọ ka ekewapụtara dị ka na-egbu egbu, Ahụrụ m ọtụtụ njikọ ndị ọzọ bụ na-enyo enyo n'ime nyocha mana akara n'okpuru ebe nsi dị ka mma. Ha nọ na ibe ndị na-enweghị ike ịgụ, na ngalaba na-enweghị isi, na nke na-ewetaghị okporo ụzọ na-ezo aka na saịtị ahụ.
Kedu ihe bụ Disavow?
Google na-enye usoro iji mee ka ha mara mgbe njikọ ọjọọ ndị a dị, a maara usoro a dị ka a ekweta. Ị nwere ike bulite faịlụ ederede dị mfe nke na-edepụta ngalaba ma ọ bụ URL nke ịchọrọ ịhapụ na ndeksi Google mgbe ị na-ekpebi ka saịtị gị ga-esi tinye ọkwa.
Ajụ – M na-agụ ọtụtụ isiokwu online ebe SEO ọkachamara na-eji disavow ngwá ọrụ na-emesapụ aka na-akọ ton nke ngalaba na ibe na Google. M a obere ihe na-agbanwe agbanwe na m obibia… na-enyocha onye ọ bụla njikọ maka àgwà nke saịtị, ya na-ezo aka okporo ụzọ, ya n'ozuzu ogo, wdg M na-eme ka n'aka na ezi backlinks na-ahapụ naanị na-enyo enyo na-egbu egbu njikọ na-disavowed. M na-ahọrọkarị n'akụkụ nke ịjụ ngalaba dum karịa ibe kwa.
Kama iji ngwá ọrụ disavow nke Google, ị nwekwara ike ịnwa ịkpọtụrụ onye nwe saịtị na-ezo aka iji wepụ njikọ ahụ ... ma na saịtị spam ndị a, na-egbu egbu, achọpụtara m na ọ nweghị nzaghachi ma ọ bụ ozi kọntaktị ọ bụla.
Ngwa Semrush Disavow
Ngwa ndị dị site na Semrush bụ nke echere nke ọma iji dobe saịtị gị ma ọ bụ ndị ahịa gị. profaịlụ backlink. Ụfọdụ atụmatụ ngwá ọrụ ahụ na-enye:
Overview – akụkọ ị na-ahụ n'elu.
Nyocha - ndepụta zuru oke nke backlink ọ bụla achọtara maka saịtị gị, ọ bụ nsi, ibe ebe a na-aga, ederede arịlịka, yana omume ị nwere ike ime, dị ka idepụta ya ma ọ bụ tinye ngalaba ma ọ bụ ibe na faịlụ ederede jụrụ.
Ajụ - ike bulite faịlụ disavow gị ugbu a maka saịtị ma ọ bụ budata faịlụ disavow ọhụrụ maka bulite na njikwa ọchụchọ Google.
Ndepụta - na njikọta na Google Search Console na Google Analytics, enwere ike nyochaa nkwenye gị ugbu a n'ime gị Semrush oru ngo ịhụ mmetụta o nwere.
Nke a bụ nseta ihuenyo nke nyochaa backlink … M ga-ewepụ ndị ahịa ozi na ngalaba, lekwasịrị, na arịlịka ederede dị ka m na-achọghị asọmpi ịhụ onye m na-arụ ọrụ na.
Faịlụ ederede agọnahụ nke Semrush na-ewulite ma na-edobe maka gị zuru oke, aha ya na ụbọchị ma tinye nkọwa na faịlụ ahụ:
Nzọụkwụ ọzọ bụ bulite faịlụ. Ọ bụrụ na ị nweghị ike ịhụ Google's Disavow Tool na search console, nke a bụ njikọ ebe ị nwere ike bulite faịlụ ederede Disavow gị:
Ihe nchọta Google achọghị njikọ
Mgbe ichere izu 2-3, anyị na-ahụ mmegharị na mkpụrụokwu enweghị akara. Nkwụsị ahụ na-arụ ọrụ ma onye ahịa nwere ike ugbu a ịmalite nchọta ọchụchọ ha na-enweghị akara.
Akwụla ụgwọ maka backlinks
Echere m bụ na ụlọ ọrụ ikpeazụ nke na-elekọta saịtị ndị ahịa na-eme ụfọdụ backlinking akwụ ụgwọ iji gbalịa imeziwanye ọkwa ha n'ozuzu ya. Nke a bụ azụmahịa dị ize ndụ… ọ bụ ụzọ dị mma ị ga-esi chụọ onye ahịa gị wee bibie visibiliti search engine ha. Na-achọ mgbe niile ka ụlọ ọrụ gị kpughee ma ọ bụrụ na ha na-arụ ụdị ọrụ ahụ mbụ.
Emere m nyocha backlink maka ụlọ ọrụ na-aga n'ihu ọha na onye tinyegoro nnukwu ego na SEO siri ike afọ gara aga. Enwere m ike ịmegharị njikọ ndị ahụ n'ụzọ dị mfe njikọ ugbo ha na-ewu ụlọ ka ha nwee ike ịhụ ndị ahịa ha. Onye ahịa m kwụsịrị nkwekọrịta ahụ ozugbo wee mee ka m rụọ ọrụ na ịhapụ njikọ ndị ahụ. Ọ bụrụ na asọmpi, mgbasa ozi, ma ọ bụ Google chọpụtara ndị njikọ, nke a ahịa azụmahịa nwere ike e bibiri… n'ụzọ nkịtị.
Dị ka m kọwara ya ka m ahịa… ma ọ bụrụ na m nwere ike Chọpụta njikọ azụ ha SEO ike na ngwaọrụ dị ka Semrush. Eji m n'aka na puku kwuru puku PhDs ụlọ algọridim na Google nwekwara ike. Ha nwere ike abawanyela ọkwa n'ime obere oge, mana n'ikpeazụ a ga-ejide ha na-emebi Usoro ọrụ Google na - n'ikpeazụ - mebie akara ha n'enweghị ihe ọ bụla. Ọ bụghị banyere ọzọ na-eri nke ime ka m na-eme nnyocha, na backlink forensics, mgbe ahụ, ndị na-adịghị ekwe ka ha na-ese n'elu mmiri.
Ụzọ kachasị mma iji nweta backlinks bụ irite ha. Wulite ọdịnaya dị ukwuu n'ofe mgbasa ozi niile, kesaa ma kwalite ọdịnaya dị ukwuu n'ofe ọwa niile, ị ga-enwetakwa ụfọdụ backlinks dị egwu. Ọ bụ ọrụ siri ike mana ọ nweghị ihe egwu metụtara itinye ego ị na-eme.
Debanye aha maka Semrush
Ọ bụrụ na ị nọ n'ọkwa oge siri ike ma chọọ enyemaka ụfọdụ, anyị na-enyere ọtụtụ ndị ahịa aka na mbọ njikarịcha nchọnchọ ha. Jụọ maka anyị SEO ndụmọdụ na saịtị anyị.
Nkpughe: Abụ m onye ọrụ ike yana onye mmekọ dị mpako maka Semrush na m na-eji njikọ njikọ m n'ime akụkọ a.
Tags: nyochaa backlinkbacklink forensicsprofaịlụ backlinknjikọ azụbacklinksọjọọ backlinksnjikọ ọjọọekwetagoogle search njikwaotu esi eme nyocha backlinkotu esi eme nyocha backlinksnjikọ detoxnjikọ forensicsnjikọresearchtoolsakwụ ụgwọ backlinkssearch engine njikarịchasemrushSemrush backlink ngwaọrụAbacklinks na-egbu egbu
SellerSmile: Gịnị kpatara ị ga-eji wepụta ndị otu Nkwado Ecommerce gị
Ọ dị ka ị ma na m na-eme nke a n'abalị a. E kpochapụrụ backlinks niile mana na ibe mbụ nke saịtị site na ịgbanwee URL na ọ bụghị 301 ime ha - nnukwu PITA. Ọ ga-ewe ọnwa mana ọ bụ ya mere m ji nweta okpu isi awọ gbara ọchịchịrị.
A ga-ajụrịrị maka ibe mbụ
Sep 6, 2013 na 11: 31 AM
Ọ dị mfe ụzọ nwunye. Naanị banye na LinkResearchTools na ndị ọzọ ha ga-eme na-akpaghị aka. Agụrụ m otu akụkọ gbasara otu esi ezere Penguin na usoro ntuziaka. http://www.technologyace.com/internet-marketing/seo/recover-blogwebsite-google-latest-penguin-2-0-update/
Nọvemba 27, 2013 na 6:42 nke ụtụtụ
Mgbe m ji Njikọ Njikọ na Njikọ Detox enwere m nkụda mmụọ maka ọrụ na nsonaazụ ya. Ọ bụghị ọtụtụ ihe mere, e nyeghịkwa m aka dị ukwuu mgbe m chọrọ ya. Ekpebiri m iji The Link Auditors mezie backlinks m mgbe m hụchara ezigbo nyocha na forums dị iche iche. Ọrụ ha ka nnọọ mma! Ha nwere otu mgbe niile iji nyere gị aka na ajụjụ ma ọ bụ ndụmọdụ. N'iji ngwa The Link Auditors', enwere m ike ịchọta njikọ ndị na-egbu egbu m niile, wee wepụ ha niile. Jason, onye otu m gwara okwu, nyere aka na nkwado ekwentị. O gere ntị ná nsogbu m ma kọwaa kpọmkwem ihe na-ezighị ezi. Ozugbo o mere nke a ọ gwara m ngwá ọrụ ndị ga-abara m uru.
N'iji ngwaọrụ Njikọ Njikọ, enwetara m data zuru oke, enwere m ike ịhụ kpọmkwem njikọ ndị na-emerụ m ahụ ma amaara m njikọ dị mkpa iji wepụ. Iji ha mwepụ ngwá ọrụ dị nnọọ mfe dị ka ọ bụ n'ụzọ zuru ezu akpaka na nnọọ ngwa ngwa. Ejila m ngwá ọrụ mwepụ dị iche iche dị na ịntanetị, na nke ha kacha mma!
Nọvemba 28, 2013 na 4:31 nke ụtụtụ
Ejikwara m The Link Auditors kwa. Ha nyeere m aka nke ukwuu na nyocha m, na-enye nkwado mgbe m chọrọ ya yana ịkọwara m nsogbu m. Daalụ maka ibipute nke a ka m chere na ọtụtụ ndị mmadụ kwesịrị ịma gbasara ha. Ọrụ ha na-enye dị oke egwu, nke a pụrụ ịdabere na ya ma dị mfe iji mezuo.